Kuzobe kuboshelwe izingwazi kowe-Jazz in July | News24
Kuzobe kuboshelwe izingwazi kowe-Jazz in July
Durban - Kuzobe kuboshelwe izingwazi emcimbini we-Jazz in July ozobe useThekwini ngempelasonto.
Lo mcimbi uzobe ungowokuqala ngqa kanti uhlelelwe ukuba se-Botanical Gardens ngeSonto futhi abahleli bawo bathi uzokwenziwa minyaka yonke
Kuboshelwe ngabaculi beJazz abangaconsi phansi kubathandi balo mculo kanti kulindeleke ukuba uhehe izivakashi eziningi njengoba kuzobe kuphithizela edolobheni laseThekwini.
Umhleli walo mcimbi uMdu Ngcobo uthe kubalulekile ukuthokozisa nabantu abakhulile ngomculo abawuthandayo.
Uthi banethemba lokuthi lo mcimbi uzokhula uphenduke oyintandokazi minyaka yonke.
Kulo nyaka, kumenywe abaculi abafana noMondli Ngcobo, Naima Kay, Amanda Black, Thandisa Mazwai, Zonke Dikana, R ay Phiri, Sands (tig tig), Musa & Robbie Malinga kanye nabanye.
OLUNYE UDABA:ITheku lizosingatha umcimbi wonobuhle okokuqala e-Afrika
“Abathandi bomculo we–jazz bebewulangazelela kakhulu umcimbi ofana nalona eThekwini ngalesi sikhathi nokusho ukuthi iphupho labo lifezekile. Sizoqopha umlando ngokuphatha abaculi abangaconsi phansi kuleli, abantu abeze ngobuningi babo kule-picnic yabantu esebekhulile empilweni.”
UNgcobo uthe enye yezinto ezibagqugquzele ukuthi benze lo mcimbi ofana nalona ukuthi abantu balinda isikhathi eside njengoba i-Halzemere jazz festival iba kanye ngonyaka, babone ukuthi abenze omunye umcimbi othi awufane nawo baphinde bathuthukise idolobha lase-Thekwini kanye nesifundazwe iKwaZulu-Natal.
Amathikithi atholakala ngo-R290(General), R400 (Golden circle), R850 (VIP). Lo mcimbi uzoba se-Botinical Gardens eThekwini kanti amasango azovulwa ngo-09:00 ekuseni umcimbi uqale ngo-11:00 ekuseni kuze kube u-23:00 ebusuku.